ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ မိဘုရားလေးယောက် ရှိပြီး သိပ်ကို ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါး ရှိသတဲ့။ ဘုရင်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ စတုတ္ထမြောက် မိဘုရား ကိုတော့ အချစ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံး၊ အနူးညံ့ဆုံး၊ အချိုမိန်ဆုံး ဆက်ဆံပါ သတဲ့။ တတိယမြောက် မိဘုရားကိုလည်း ချစ်တာပါပဲ။ အိမ်နီးချင်း တိုင်းပြည် တွေကိုလည်း တတိယမြောက် မိဘုရားကို ကြွားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမိဘုရားဟာ သူ့ကို တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ထားသွားခဲ့မှာကိုတော့ သူ စိုးရိမ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒုတိယမြောက် မိဘုရားကို ချစ်တာကျတော့ တစ်မျိုး.. အဲဒီ မိဘုရားကို သူ့ရဲ့ တိုင်ပင်ဖော်၊ တိုင်ပင်ဖက်၊ ယုံကြည်အားကိုရာအဖြစ် ဘုရင်ကြီးက မှတ်ယူ တယ်။ ပြသနာတွေ ဖြစ်လာတိုင်းမှာ ဒုတိယမြောက် မိဘုရားနဲ့တိုင်ပင်လေ့ရှိပြီး မိဘုရားကလည်း အမြဲကူညီ ဖြေရှင်း ပေးပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး မိဘုရား ကတော့ ဘုရင်ကြီး အပေါ်မှာ တော်တော်သစ္စာ ရှိပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေမှာ ပါဝင်ကိုင်တွယ်ပေးပြီး ဘုရင်ကြီးကိုလည်း နှစ်နှစ်ကာကာကို ချစ်ခင် မြတ်နိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရင်ကြီးကတော့ သူ့ကိုတစ်ခြား မိဘုရားတွေလောက် မချစ်ပါဘူး။
တစ်ရက်မှာတော့ ဘုရင်ကြီးဟာ အသည်းအသန်ကို နာမကျန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘ၀ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မှာကို သိနေတဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေ၊ ဇိမ်ရှိရှိ နေခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ပြန်လည်စဉ်းစားမိပြီး "ငါ့မှာ မိဘုရားလေးယောက် ရှိတယ်.. ဒါပေမယ့် ငါသေရတော့ တစ်ယောက်ထဲ ပါလား" လို့တွေးမိတော့တယ်။ နောက်တော့ သူကသူ့ရဲ့စတုတ္ထမြောက် မိဘုရားကိုခေါ်ပြီးမေးလိုက်တယ်..။
"အချစ်ရေ.. ကိုယ်မင်းကို အချစ်ဆုံးပဲ ဆိုတာ မင်းသိတယ်နော်.. မင်းကိုကောင်းပေ့၊ လှပေ့ဆိုတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေကို ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်၊ မင်းကိုလည်း ငါ အရမ်း ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်.. မင်း ငါနဲ့ အတူတူ လိုက်သေနိုင်မလား" ။ မိဘုရားက "လုံးဝပဲ" လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ နောက်ထပ် စကား တစ်လုံး တလေမှ မပြောပဲ လှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ အဖြေစကားဟာ ဘုရင်ကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို ဓါးနဲ့မွှန်းသလိုပဲ ခံစား ရစေပါတယ်။
၀မ်းနည်းသွားတဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ ဒုတိယမြောက် မိဘုရားကို ခေါ်ပြန်တယ်။ "ငါဟာမင်းကို ငါ့ဘ၀နဲ့ ချီပြီး ချစ်ခဲ့တယ်။ ခုတော့ ငါသေရတော့မယ်.. မင်း ငါနဲ့တူတူ လိုက်သေနိုင်မလား"။ "မသေနိုင်ပါဘူးရှင်... ဘ၀ဆိုတာ ကောင်းတာတွေကို ခံစားဖို့ ဖြစ်လာတာ.. ရှင်သေရင် ကျွန်မ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်မှာပေါ့" လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ဘုရင်ကြီးရဲ့ နှလုံးသားဟာ အေးစက် တောင့်တင်း သွားလေရဲ့။
နောက်တော့ တတိယမြောက် မိဘုရားကိုလည်း ခေါ်လိုက်တယ်။ "ငါဟာ အမြဲတမ်းပဲ မင်းရဲ့ အကူအညီတွေကို ယူခဲ့တယ်.. မင်းကလည်း ပြသနာတွေကို ငါနဲ့အတူတူ ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ ငါနဲ့ တူတူ လိုက်သေနိုင်မလား အချစ်ရယ်"။ "၀မ်းနည်းပါတယ်ရှင်.. ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မ ရှင့်ကို မကူညီနိုင်တော့ပါဘူး.. အဲ ဒါပေမယ့် ရှင့်ရဲ့ အသုဘကိုတော့ ကျွန်မ လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်.. ရှင့်ရဲ့ အုတ်ဂူဆီသို့လည်း ကျွန်မ လာပါ့မယ်"လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဘုရင်ကြီးဟာ အတော်လေးကို စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ "ကျွန်မ ရှင်နဲ့ အတူတူ လိုက်သေမယ်.. ရှင်ဘယ်သွားသွား ရှင့်နောက်က ကျွန်မလိုက်ဖို့ အသင့်ပါပဲ" ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ဘုရင်ကြီးဟာ ချက်ချင်းပဲ ခေါင်းထောင် ကြည့်လိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး မိဘုရားကို သူ တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမဟာ အတော်လေးကို ပိန်လှီးနေပြီး ဝေဒနာခံစားနေရပုံ ပေါက်နေတယ်။ ဘုရင်ကြီးဟာ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ သူမကို ပြောလိုက်တယ် "ငါ မင်းကို ပိုဂရုစိုက်ခဲ့သင့်တာ.. နောက် ဘ၀မှာ အခွင့်အရေး ရှိမယ်ဆိုရင် ငါ ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်" လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲဗျာ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ဘ၀မှာ ဇနီးလေးယောက် ရှိပါတယ်..။ စတုတ္ထမြောက် ဇနီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပါပဲ.. သူ့ကို ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းကောင်း ကျွေးမွေး ပြုစုခဲ့ပါစေ.. သေသွားတဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ ထားခဲ့ရတာပါပဲ။ တတိယမြောက် ဇနီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါ။ ကိုယ်သေသွားတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ပါးသူ လက်ထဲ ရောက်သွားတာပဲလေ။ ဒုတိယမြောက် ဇနီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ အသက်ရှင်နေစဉ်မှာ အနားမှာရှိပြီး ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းခဲ့ ကောင်းခဲ့၊ သူတို့တွေ ကိုယ့်အတွက် အများဆုံး လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ ကိုယ်သေသွားတဲ့ အချိန်မှာ အသုဘ လိုက်ပို့မယ်.. နောက်တော့ အုတ်ဂူလေးဆီ လာကြမယ်.. ဆုတောင်းပေးကြမယ်။ အဲ. ပထမဆုံး ဇနီးကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ .. စိတ်(ကုသိုလ်စိတ်-အကုသိုလ်စိတ်) ပဲပေါ့ဗျာ။ သူ တစ်ခုတည်းကသာ သေသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်သွားရာ နောက်ကို လိုက်နိုင်တဲ့ သူတွေပေါ့။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ လုပ်သင့်တာက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ စိတ်အင်အားကို ခုကတည်းက တောင့်တင်း ခိုင်မာအောင် လုပ်ကြဖို့ပါပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်သေချိန်မှာ ဘ၀ကူးကောင်းအောင် ခုကတည်းက ပြင်ဆင် ထားသင့်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ကျင်လည်ရာ သံသရာမှာ သူကသာ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အဆင်သင့်နဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေမှာပဲပေ့ါ။
ရဲရင့်သူများဖိုရမ် မှ ဤစာသားကို ကူးယူဖော်ပြပါသည်..။ (မှတ်ချက်- အနည်းအကျဉ်း ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ထားပါသည်..။)
ဒါကတော့ ကျနော့ရဲ့ အမြင်လေးပါ.. အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတွေးလေးဟာ တကယ် တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကို သံဝေဂရဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သူ ဖော်ပြပေးသွားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကလည်း လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပြန်တိုက်ကြည့်တော့ တကယ်ကို ဟုတ်နေတာပါ။ ကျနော်တို့တွေ အချစ်ဆုံးလို့ ထင်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ တကယ်တော့ သေရင် ကိုယ်နဲ့ ပါမလာပါဘူး.. မီးရှို့ပြီး ပြာ ဖြစ်သွားရတာပါ။ ဒီလိုပါပဲ.. ဥစ္စာ ပစ္စည်းဆိုတာလည်း အသက်ရှင်နေတုန်းမှာသာ ဒါငါ့ဟာ.. ဒါင့ါပစ္စည်း.. ဒါငါ့ပိုက်ဆံနဲ့ ပြောနေကြရတာပါ။ သေသွားရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ ပါသွားတာဆိုလို့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်မရှိတဲ့ အချိန်ှမှာ တခြားသူတွေ ဝေမျှ သုံးစွဲ သွားကြရတာပဲ မဟုတ်ပါလား။ နောက်တစ်ခုကတော့.. အရင်းနှီးဆုံးလို့ ပြောလို့ရတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း မိသားစုတွေပါပဲ.. သူတို့လည်း သေခါနီးအချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက် ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဘေးနားကနေ အသာလေးကြည့်ပြီး.. သူတော့ သွားရှာပြီ.. သနားလိုက်တာ.. မခွဲနိုင်ပါဘူး.. ဒီလောက်ပဲ ပြောနိုင်ကြပါတယ်။ အတူတူ လိုက်မလားဆိုတော့ နိုး လို့ပဲ ပြောကြမှာပါ။
တကယ်တော့.. ကျနော်တို့တွေနဲ့ အတူတူ လိုက်လာတာဟာ ကျနော်တို့တွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်တွေ အကုသိုလ်တွေပါပဲ။ ရေဗူးနဲ့ ဖိနပ်မပါရင် နွေအခါမှသိ.. ဒါနနဲ့ သီလမပါရင် သေခါမှသိ… တဲ့။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာဆိုတဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေ လုပ်ဖို့မေ့နေတာဟာ စိတ်ကို ပြစ်ထားတာပါ။ စိတ်ကို ပြစ်ထားတယ် ဆိုရင်တော့ သေခါနီးကျမှ သိပါလိမ့်မယ်။ သေခါနီးမှာ ကိုယ်နဲ့ နှဖူးတွေ ဒူးတွေရင်ဆိုင်ရမှာက သေမင်းပါ.. ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့တွေဟာ သေဖို့အတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲ?.. နောက် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စိတ်ကိုပြစ်မထားပဲနဲ့.. ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာဆိုတဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေ ဘယ်လောက် စုဆောင်းမိပြီိလဲ?.. ဒီအချက်တွေကို အမြဲတမ်းမေးပြီး စိတ်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် နေရပါမယ်။ ဒါမှလည်း.. ပုံပြင်ထဲက ဘုရင်ကြီးလို သေခါနီးကျမှ အားကိုးစရာ လိုက်ရှာရတဲ့ အဖြစ်က လွတ်မှာပါ။ သေခါနီးအချိန် ကိုယ့်မှာ အားကိုးစရာ မရှိရင် စွဲမိစွဲရာစွဲပြီး ရောက်ချင်တဲ့ ဘ၀ကို ရောက်သွား နိုင်ပါတယ်။ ကုသိုလ်တရား မေ့ပြီး စိတ်ကို ပြစ်ထားတယ် ဆိုရင်တော့.. အများဆုံး ရောက်မှာကတော့ အပါယ်လေးဘုံပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့တွေဟာ သေခါနီးမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အားကိုးစရာမလိုအောင် ကုသိုလ်တရားတွေ များသထက် များအောင်ပြုပြင်ပြီး စိတ်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သေခါနီးအချိန်မှာ ပုံပြင်ထဲကဘုရင်ကြီးလို နောက်တမရမိအောင်.. ဘုရားရှင် ဟောပြဆုံးမတဲ့ မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင် ဖြူအောင် စိတ်ကိုထား ဆိုတဲ့ စကားလေးကို လက်ကိုင်ထားပြီး စိတ်ကိုပြစ်မထားပဲနဲ့.. အမြင့်ဆုံး ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ ၀ိပဿနာ ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ သေနိုင်အောင် ကြိုးစား ကြပါလို့ ဆန္ဒပြု ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ ကျနော်လည်း ကြိုးစား နေတုန်းပေါ့..
by-Royal Hero Media